Chii chakavanzika cheHDMI tambo
na admin musi wa 20-05-20
Kune vazhinji vashandisi vedu vekumba, mapurojekiti uye zvimwe zvinoshandiswa zvinopa zvinyorwa hazvisi kure zvakanyanya, kazhinji mita imwe kusvika maviri, saka isu kazhinji tinosarudza 1.5-metres HDMI tambo. Mukusarudzwa kwetambo dzeHMMI, kupfupika-kupindirana kufambiswa kunogona kutarisirwa pasi pemamita mashanu. Kusarudzwa kweHDM ...
Kuzivikanwa kweavo vanobatanidza zvemagetsi kwawedzera mhando yehunyanzvi uye huchenjeri maitiro emaindasitiri anoshanda
Munharaunda yanhasi, sainzi uye tekinoroji iri kukura nekukurumidza uye nekukurumidza, uye vanhu vari kuita zvishoma nezvishoma zvemagetsi nemagetsi. Magetsi zvinonongedza ndicho chinhu chitsva chakadai. Pamhedziso mbiri dzechiuno, pane maviri conductors. Panogona kunge pasina chinzwano pakati pevaitisi vaviri ava. The r ...
Ruzivo rwekutanga rwemitsara yedata
Chingwe data, iyo inoshandiswa kubatanidza nharembozha nemakomputa zvekutamisa data kana zvinangwa zvekutaurirana. Mukurumbira kutaura, chishandiso chekubatanidza makomputa uye nharembozha kuendesa mafaera akadai semavhidhiyo, toni dzemhete, uye mifananidzo. Zvino, nekukurumidza kukura kweiyo ...